“सामुदायिक विद्यालय सुधारको जिम्मा निजी विद्यालयलाई दिनु राज्यको गैरजिम्मेवारीपन हो” - Online Majdoor
“सामुदायिक विद्यालय सुधारको जिम्मा निजी विद्यालयलाई दिनु राज्यको गैरजिम्मेवारीपन हो”
सस्तो र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने र २१ औँ शताब्दीका लागि योग्य नागरिक तयार गर्ने उद्देश्यले आजभन्दा दुई दशकअगाडि ख्वप माविको स्थापना र त्यसपछि ख्वप कलेज हुँदै २ वटा इन्जिनियरिङ्ग कलेजसहित ६ वटा कलेज गरी ७ वटा शैक्षिक संस्थाहरू भक्तपुर नगरपालिकाले सञ्चालन गर्दै आएको छ । २ दशकको निरन्तरको प्रयासपछि ती सबै शैक्षिक संस्थाहरू देशकै उत्कृष्ट शैक्षिक संस्थाहरूको रूपमा स्थापित छन् । देशभरका झन्डै ६ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत ती शैक्षिक संस्थाहरू स्थानीय तहबाट सञ्चालित नेपालकै पहिलो शैक्षिक संस्थाहरू हुन् ।
आर्थिक उदारीकरणको नीति लागू भएसँगै देशमा निजी विद्यालय र कलेजहरू व्यापकरूपमा खोलिन थालिए । सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा नयाँ विद्यालय, कलेज र विश्वविद्यालयहरू स्थापना र सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया पूरै बन्द भए । शिक्षालाई सार्वजनिक सेवाको रुपमा लिइनुपर्नेमा सरकार स्वयम्ले निजी बेचबिखनको वस्तुझँै बनाउँदै लग्यो । महँगा महँगा विद्यालय र कलेजहरूमा गरिब जनताका छोराछोरीहरूले पढ्न सक्दैनन् । प्रतिस्पर्धी निजी शैक्षिक संस्थाहरूसामु सामुदायिक शैक्षिक संस्थाहरू ओझेलमा पर्दै गए । सर्वसाधारण जनतामा पनि सामुदायिक शैक्षिक संस्थाहरू राम्रो नभएको छाप पर्न थाल्यो । कतिपय गरिब परिवारले आफ्ना सन्तानको भविष्यका लागि भन्दै खाई नखाई निजी शैक्षिक संस्थाहरूमा पढाउने संस्कारको विकास हुँदै गयो । भक्तपुर नपाबाट सञ्चालित शैक्षिक संस्थाहरूले उत्कृष्ट नतिजा दिइरहेका छन् । स्थानीय जनता, जनप्रतिनिधि, व्यवस्थापन समिति, शिक्षक, प्राध्यापक, अभिभावक र विद्यार्थी सबैको संयुक्त प्रयासले यो सम्भव भएको हो ।
अहिले सरकारमा बस्ने राजनैतिक दलले निर्वाचन घोषणापत्रमा शिक्षाको लागि कुल बजेटको २० प्रतिशतसम्म विनियोजन गर्ने बताएको थियो । निर्वाचनपछि गठित दुईतिहाइको सरकारले निर्वाचन घोषणापत्रलाई बिर्सेर शिक्षामा बर्सेनि बजेट कम गर्दै लगेको छ । चालू आ.व २०७७÷७८ मा झन्डै १० प्रतिशत पु¥याइएको छ । राज्य शिक्षाको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीबाट पूरै पन्छिन खोज्दै छ । सामुदायिक विद्यालय सुधारको जिम्मा निजी विद्यालयलाई दिनु त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । यो आर्थिक वर्षको बजेटमा संस्थागत विद्यालयलाई सामाजिक उत्तरदायित्व पूरा गर्न एक सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक पूर्वाधार सामग्रीसहित शैक्षिक गुणस्तर सुधार्ने जिम्मेवारी दिने नीति घोषणा भयो । यो सङ्घ सरकारको गैरजिम्मेवार र लज्जास्पद कार्य हो । व्यवहारले यो शैक्षिक माफियाहरूको स्वार्थबाट प्रेरित भएर आएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
नेपालको संविधानमा मावि तहसम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था छ । मौलिक हकमा राखिएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नतिर सरकारले ध्यान दिएको छैन । संविधानअनुसार कक्षा ११ र १२ माविअन्तर्गत पर्छ । अहिलेसम्म सरकारले आवश्यक न शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्था ग¥यो न कुनै भौतिक पूर्वाधार वा अनुदानकै व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले सामुदायिक विद्यालयहरू विद्यार्थीहरूबाट पैसा उठाएर पढाउन बाध्य छन् ।
सरकारले आवश्यक व्यवस्था गरी नदिँदा हाम्रा शैक्षिक संस्थाहरू परनिर्भर हुँदै गएका छन् । स–साना सेमिनार, गोष्ठी, अन्तरक्रिया वा तालिमहरू तथा स–साना विकास निर्माणका काम गर्नसमेत विदेशीको मुख ताक्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । विदेशीहरूले नेपाली विद्यार्थीहरूमा भएको अन्यायविरुद्ध लड्ने सङ्घर्षशील भावनालाई कमजोर बनाउन पनि तालिम र सेमिनारको नाउँमा करोडौँ पैसा खर्च गरिरहेका हुन्छन् । यसबारे हाम्रा शिक्षक विद्यार्थीहरू सधैँ सचेत हुनुपर्छ ।
भक्तपुरका कुनै पनि विद्यार्थी पैसाको कारण उच्च शिक्षा हासिल गर्ने अवसरबाट वञ्चित नहोस् भन्ने हाम्रो सोच हो । विगत दुई वर्षदेखि गरिब परिवारका विद्यार्थीहरूलाई उच्च शिक्षा हासिल गर्न रु. ५ लाखसम्म सहुलियत ब्याजदरमा नगरपालिकाले ऋण प्रदान गर्दै आएको छ । यो आ.व. २०७७।७८ मा १४२ जना विद्यार्थीहरूले उच्च शिक्षा पढ्न शैक्षिक ऋण माग गरेका छन् । वडा–वडामा शिशु स्याहार केन्द्रको सञ्चालन, मावि, कलेजहरू स्थापना र सञ्चालन गर्दै शैक्षिक ऋणसमेत प्रदान गरी नगरपालिकाले आफ्नो स्रोत र साधनले भ्याएसम्म शिक्षाको जिम्मेवारी बहन गर्दैै आएको यहाँहरूमा जानकारी गराउन चाहन्छौँ ।
देशको लागि भविष्यमा आवश्यक पर्ने शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन गर्न इतिहास, भूगोल, राजनीतिशास्त्र, संस्कृति र नेपालभाषा लिई जुनसुकै कलेज र विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत नगरवासी विद्यार्थीलाई सम्पूर्ण छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आएको पनि जानकारी गराउँछौँ ।
हामीले ख्वप विश्वविद्यालय सञ्चालनको लागि पनि प्रयास गर्दै आएका छौँ । संसदीय समितिले समेत विश्वविद्यालय सञ्चालनको लागि सिफारिस गरिसक्दा पनि विधेयक संसद्बाट पारित हुन सकेको छैन । विधेयक पारित भएमा शिशुशालादेखि विश्वविद्यालय तहसम्म सञ्चालन गर्ने भक्तपुर नगरपालिका देशकै पहिलो स्थानीय तह हुनेछ । सायद त्यो पनि छिट्टै आउने आशा गर्दछौँ ।
(२०७७ फागुन १४ गते सम्पन्न भक्तपुुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित ख्वप माध्यमिक विद्यालयकोे २१ औँ, ख्वप कलेजको १९ औँ र शारदा क्याम्पसको ३० औँ वार्षिक उत्सव कार्यक्रम – २०७७ मा कलेज÷मावि व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष एवं नगर प्रमुख सुनिल प्रजापतिले व्यक्त मन्तव्यको सार सङ्क्षेप)
लेनिनका जीवनका पानाहरू –६/लेनिनको सरकार चलाउने शैली